समयमै रकम जुटाउन नसक्दा मृत्यु सगँ लड्दै एन्जिला,सहयोगको अपिल
- नेपाली सन्देश शुक्रबार, चैत्र २३, २०७४ , 7.9K जनाले हेर्नुभयो
चैत्र २३ पोखरा । साथी भाइ सगँ रमाइलो गर्ने कलकलाउँदो उमेर मा एन्जिला गुरुङ भने जिवन र मृत्यु सगँ लडिरहेकी छन् ।
दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि १८ वर्षीय एन्जिला यतिबेला अस्पतालको शैयाँमा बाँच्ने आशमा छटपट्टिरहेकी छन् ।
जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा हाल कक्षा १२ मा अध्ययनरत एन्जिला कक्षा १० देखि नै रोग बाट ग्रसित बनेकी थिइन् । पहिलो पटक उनको पेट मा समस्या देखिए पछि उपचारका लागी २० हजार रकम जुटाउन नसक्दा उनको समयमै उपचार हुन नसकेको एन्जिलाकी आमा पुर्ण गुरुङ बताउछिन् ।
पहिलै कक्षा १० मा पढ्दा एन्जिलाले पेट दुख्यो भनेपछि सामान्य उपचारका लागी अस्पताल लगेर औषधी खाएपनि ठिक नभएको एन्जिलाकी आमाले बताइन् । दोस्रो पटक पनि त्यही समस्या दोहोरिदाँ एन्जिलालाई फेरि चेकअपका लागी अस्पताल लगिएको आमाले बताइन् । एन्जिलाकी आमाको अनुसार दोस्रो पटक एन्जिालाको स्वास्थ्य अवस्था चेक गर्दा डाक्टरले मृगौलामा थोरै समस्या देखिएको र अपरेशनको माध्यम बाट उपचार गर्नुपर्ने, त्यसका लागी २० हजार रकम चाहिने बताएका थिए ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण २० हजार रकम जुटाउन नसक्दा एन्जिलाको परिवार उनको उपचार गर्न बाट पछि हट्न बाध्य भएको एन्जिलाकी आमा बताउँछिन् ।
कक्षा १२ को वार्षिक परिक्षा नजिकिदैँ छ ,एन्जिलाकी साथीहरु वार्षिक परिक्षाका लागी तयारी गरिरहँदा एन्जिला भने अस्पतालको शैयाँमा आफ्नै जिवनको परिक्षा दिइरहेकी छन्,समयमै २० हजार रकम जुटाउन सकेको भए सायद आज एन्जिलाले यस्तो भयावह परिक्षाको सामना गर्नुपर्ने थिएन होला ।
उच्च शिक्षा दिई छोरीलाई साक्षर बनाउई बुढेसकालमा आफुहरुको सहारा बन्ला भन्ने सपना बुनेका आमा बाबा एतिबेला छोरीको जिवनका लागी भगवान सगँ भिक्षा मागिरहेका छन।
अहिले एन्जिलाको दुवै मृर्गौला फेल भइसकेको छ उनको ४ महिना अगाडी देखि उपचार चलिरहेको छ तर उपचारका लागी रकम को अभाव छ । एक हप्तामै दुई पटक हेमो डाइलोशिश गर्नुपर्ने हुदाँ हप्तामै १० ,१५ हजार जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको परिवारले विगत ४ महिनामै ऋणधन गरि २ लाख खर्च भइसकेको बताउँछन् । एन्जिलाकी बाबा मिन बहादुर गुरुङ पोखरामै विगत लामो समय देखि नगर बस चालकको काम गर्दै आएका छन् । उनको एक्लैको कमाईले छोरीको उपचारमा छेउ पनि नलागे पछि आमा पुर्ण गुरुङ पनि छोरीको उपचारका लागी हार गुहार मागिरहेकी छिन भने आफै पनि रकम जुटाउन ज्याला मजदुरी अर्थात ज्यामी काम गर्न विवश भएकि छिन् ।
परिवारले एन्जिलाको उपचारमा आफुले सक्दो धेरै थोरै सहयोग गरिदिन अपिल गरेका छन् । सहयोगका लागी पोखरा फाइनान्स को बैंक खाता नम्बर ०१०१०००००२५२८९०००००१ मा सक्दो रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।र ९८०४१९८२८५ मा सम्पर्क गरि प्रत्यक्ष रुपमा पनि रकम हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।
स्याङजाको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थायी घर भएका एन्जिला र उनको परिवार हाल पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका स्थित जिरोकिलोमिटर मा डेरामा बस्दै आएका छन् । एन्जिलाको हाल पोखरा लेखनाथ महानगरमा अवस्थित लेकसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
एन्जिलाको उपचारमा हातेमालो गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दर्छौ ।
मोबाइल पानीमा पर्‍यो ? यसो गर्नुहोस्
मृगौला प्रत्यारोपण पछि झलनाथ खनालले पाए दोस्रो जीवन : मृगौला दिने को हुन् ?
१६ बर्षदेखि पोखराबाट सम्पर्क बिहिन ,हेम्जा निवासी पिताम्बर ढुंगाना